Shandong honglu mavesatra orinasa mpiara., LTD., Mpikambana an'i Shandong Tang vondrona, vondrona mpiara., LTD., Naorina tamin'ny 1956, ny orinasa mpiara-miasa telo arivo ny olona, ​​ara-teknika fikarohana sy ny fampandrosoana ekipa mihoatra ny telon-jato ny olona, ​​dia nandroso famokarana andalana , coating atrikasa, welding atrikasa, nohitsakitsahiko atrikasa, manan-karena dia manana traikefa amin'ny famokarana, ny fikarohana sy ny fampandrosoana.
ny orinasa ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny mavesatra orinasa no voalohany an-trano orinasa mpamokatra entana, ny harena ankibon'ny tany fipoahana-porofo injeniera fitaovana orinasa rehetra ny orinasa sy ny teknolojia mahaleo tena fikarohana sy ny fampandrosoana, amin'ny tsy miankina fananana ara-tsaina zo, no tena harena ankibon'ny tany rubber_tyred fitaterana fikambanana mpikambana, dia ankatoavin'ny ny fikambanan'ny orinasa orinasa fampitahana.
Naorina teo am-piandohan'ny ny AnBiao mirotsaka amin'ny vokatra taratasy fanamarinana, fahaizana taratasy fanamarinana, vokatra rehetra efa fiarovam-pirenena foibe fanaraha-maso ara-teknika sarotra, no voalohany orinasa ao an-toerana mahazo ahy fipoahana-porofo fanamarinana. Amin'ny alalan'ny fisafoana ny fiarovam-pirenena sy ny fiarovana foibe fanaraha-maso biraon'ny mpiara famerenana toerana, amin'ny alalan'ny tanteraka ny orinasa napetraka ny tahirin-kevitra ara-teknika, fitaovana isan-karazany, famokarana fahaizana, ary mihoatra ny 100 rindrambaiko sy ny orinasa hardware.The ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny arintany ahy avokoa, phosphate akora , vy sy ny toeram-pitrandrahana volamena. Ny fiara sy ny faritra, ny rafitra sy ny tetikasa efa nahazo taratasy fanamarinana ny patanty-pirenena.
Araka ny fiarovam-pirenena takiana amin'ny fitrandrahana arintany sy ny ahy, ny ahy dia lasa bebe kokoa avo ny fitakiana ny fitaterana fitaovana, ny orinasa famokarana ny fipoahana-porofo sy mando braking fitaterana fitaovana manaraka ny fitsipiky ny firenena ahy fiarovana, dia vokatra ny safidy ho an'ny vondrona lehibe maro. Ny orinasa dia mifototra ao an-trano, ary mandeha ho any amin'izao tontolo izao. Taorian'ny firenena tetikady fampandrosoana ara-toekarena, eo amin'ny lafiny famatsian tsikelikely fanavaozana lalina sy ny orinasa angovo vaovao, harena ankibon'ny tany an-trano mafy orina tsena, mbola hanana angovo vaovao mba hanatsarana ny vokatra sy ny varotra vokatra ny fanentanana. Mavitrika fisehon'ny Asia afovoany, Asia Atsimo Atsinanana tsena any ivelany. Ary any Rosia, Myanmar, ny Filipina sy ny firenen-kafa kosa hampitoetra ny fifandraisana raharaham-barotra.
Shandong honglu mavesatra orinasa mpiara., LTD.Located in harena ankibon'ny tany injeniera R & D sy ny fanamboarana ny milina sy ny faritra, manaraka ny "andraikitra, zava-baovao, azo antoka" foto-kevitra ny fampandrosoana, manaraka ny "hanao tsara sy matanjaka, manao lava" ny fampandrosoana ny politika, dia nanao an-toerana ho tonga ny kilasy voalohany, injeniera malaza maneran-milina orinasa.
Address: tsy misy . 1 meishan lalana, ny fampandrosoana ara-toekarena zibo faritra, zibo tanàna, faritanin'i Shandong.